Turkiga Oo Wacad Ku Martay Inay Galayso Dagaal Ka Dhex-Qarxay Laba Dal Oo Deris Ah | Aftahan News
Turkiga Oo Wacad Ku Martay Inay Galayso Dagaal Ka Dhex-Qarxay Laba Dal Oo Deris Ah
Ankara, (Aftahannews)- Armenia iyo Azerbaijan ayaa isku diyaarinaya dagaal weyn kadib markii iska horimaad culus uu ka dhex qarxay milatariga Azerbaijan iyo koox gooni u goosato reer Armenia ah, kaasi oo horseeday khasaare nafeed oo shacab iyo militari ah oo soo gaaray labada dhinac.
Khudbad uu shacabka uga jeediyey telefishinka ayaa Madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev waxa uu wacad ku maray inuu guul ka gaadhi doono ciidamada Armenia.
“Qadiyaddeena waa mid cadaalad ah waana guuleysan doonnaa,” ayuu yidhi isaga oo adeegsanaya odhaah caan ah oo laga soo xigtay kaligii taliyihii Midowga Soviet Joseph Stalin, oo uu jeediyey bilowdii dagaalkii labaad ee adduunka.
“Ciidamada Azarbaijain waxay u dagaalamayaan dhulkooda,” ayuu yidhi.
“U diyaar garooba inaad difaacdaan dhulkeena barakeysan,” ayuu yidhi ra’iisul wasaaraha Armenia Nikol Pashinyan oo qoraal soo dhigay facebook.
“Waxaan si xooggan u cambaareeneynaa weerarka Armenia ay ku qaaday Azerbaijan,” waxaa sidaas yidhi Ibrahim Kalin, oo ah afhayeenka madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan.